Sida loo furo dekedaha loona hagaajiyo isku xirnaantaada ciyaaraha fiidiyowga | Wararka Gadget
Ciyaaraha fiidiyow ee waaweyn sida Fortnite, Wicitaanka Waajibaadka: Aagga Dagaal ama PUBG kuwa kale waxay ku saleynayaan guushooda xaqiiqda ah inay gebi ahaanba xor yihiin. Si kastaba ha noqotee, maaddaama ay u baahan yihiin tiro yar oo adeegsadayaal ah oo isku mar ciyaara isla markaana mararka qaarkood xitaa corssplay, taas oo ah, dhufto kala duwan ayaa ku ciyaaraya hal xaalad. Tani waxay ka dhigeysaa tayada isku xirnaanta gaar ahaan muhiim noocyada noocan ah oo ilbiriqsi kasta la tiriyo. Waxaan kuu sharraxeynaa sida aad ugu adeegsan karto martida loo yaqaan 'DMZ Host' inay ku furaan dhammaan dekeddaha isla markaana ay si weyn u wanaajiyaan tayada isku xirnaantaada marka aad ciyaarayso ciyaaraha fiidiyowga. Waxaad si fudud u tijaabin kartaa xirfadahaaga.
1 Waa maxay DMZ Host iyo maxaa loogu talagalay?
2 Sida loo dejiyo DMZ si loo hagaajiyo daahida
3 Sida loogu meeleeyo DMZ PlayStation 4 ama Xbox One
3.1 U qoondee IP go'an PS4-keena
3.2 U xilsaar IP go'an Xbox One
4 Sida loo wanaajiyo iskuxirkeyga ciyaaraha fiidiyowga
Waa maxay DMZ Host iyo maxaa loogu talagalay?
Markii aan ka gudubno tusmada routerkeena waxay maraysaa miiraayaal taxane ah oo isku xirkeena iyo maalinba maalinta ka dambeysa ka dhigaya mid amaan ah. Tani waxay si cad u soo saartaa "ping" ama waxa adeegsada ciyaarta fiidiyaha mararka qaarkood loogu yeero "lag". Uma baahnin inaan helno caqabadan dhammaan kiisaska, laakiin had iyo jeer DMZ waxay gacan ka geysaneysaa sameynta isku xirnaanta si dhakhso leh sidaa darteedna aan u hagaajino khibradeena ciyaarta fiidiyowga, gaar ahaan hadda in isticmaaleyaal badani ay ku xiran yihiin isla shabakad iyo inaan haysanno qalab aad u tiro badan with leh WiFi guriga.
Shaqada DMZ waxay u oggolaanaysaa xiriir toos ah oo ka dhexeeya shabakadda gudaha iyo dibedda. Markii aan u xilsaarno FMZ IP-ga si dhakhso leh ayaan u shaqeyn karnaa maaddaama dhammaan dekedaha ay gebi ahaanba si caadi ah u furan yihiin (marka laga reebo qaar ka mid ah hawlwadeennada ama soo-saaraha keydka). Aragti ahaan, DMZ waxay wadataa taxaddarro qatar ah oo xagga amniga ah laakiin waxaan xusuusan nahay in kiiskan aan kaliya xoogga saarayno isku xirnaanta ciyaaraha fiidiyowga, taas oo sidaa darteed waxay isla mar un la shaqeyn doonaan qunsuliyadayada ciyaarta markaa waa inaan xoogaa ku xadidnaano dhanka sababaha qaladaadka amniga.
Sida loo dejiyo DMZ si loo hagaajiyo daahida
Waa muhiim in si sax ah loo isticmaalo DMZ waxaa lagugula talinayaa inaad xiriir yeelato adoo adeegsanaya xarigga LAN.
Waxa ugu horreeya ee aan u baahan doonno waa inaan helno qaabeynta router-ka, tan ayaan u geli doonnaa mid ka mid ah labadan cinwaan ee ku jira shabakadda biraawsarka taleefanka gacanta ama PC:
Midda ugu caansan ayaa ah inay na weydiistaan ​​username iyo lambarka sirta ah ee ay ku galaan router-ka shirkadeena, Xogtani waxay ku taal salka router-keena, in kastoo guud ahaan ay noqon karaan kuwa soo socda:
maamul / maamul
maamulka / 1234
ereyga sirta / furaha
xididka / xididka
Markaad gudaha gasho, waxaan raadin doonnaa ikhtiyaarka ah "qaabeynta horumarsan" ama la mid ah si aan u awoodno inaan marin u helno is-dhexgalka dhaqameed ee router-ka. Markii aan awoodnay inaan marinno waxaan raacnaa dariiqa soo socda: Dejin horumarsan> NAT> Soo dhaweye DMZ.
Halkan waxaan ku arki doonnaa sanduuqa maaddada ka kooban taas oo ay tahay inaan ku meeleyno IP, tan waxaan u sameyn doonnaa IP bilaash ah oo u dhigma lambarka loo adeegsado helitaanka, waxaa lagu talinayaa in lagu meeleeyo 192.168.1.XX halkaasoo "XX" uu noqon doono IP-ga qalabka ciyaartaada, Mar dambe ayaan ku bari doonnaa inaad IP-ga go'an u dhigto qalabkaaga si DMZ ay had iyo jeer u dhigmaan qalabka ciyaarta. Marka aan u xilsaarnay IP ah, dhagsii "Badbaadi / Codso" oo waxaan haysannaa DMZ.
Sida loogu meeleeyo DMZ PlayStation 4 ama Xbox One
U qoondee IP go'an PS4-keena
Waxaan tagnaa qaybta Dejinta oo waxaan raacnaa dariiqa soo socda: Shabakad> Isku xir xiriirinta internetka. Waxaan kugula talineynaa inaad tagto Settings> Network> Xaaladda Xiriirka oo aad qoro ama sawir ka qaadatid xogta haddii ay dhacdo inaad beddesho xaaladda.
Sideed u rabtaa inaad ugu xirto shabakadda? > Waxaan dooranay xulashadeena
Sideed rabtaa inaad uhesho qadka internetka? > Caado
Dejinta cinwaanka IP> Buugga
Jadwalka soo socda waxaan ku geli doonaa xogta
Our go'an DMZ IP: 192.168.1.xx / 192.168.0.xx
Maaskaro Subnet: 255.255.255.0
Albaabka caadiga ah: 192.168.0.1 / 192.168.1.1
DNS-ka aasaasiga ah: 80.58.61.250
Dejinta MTU> Automático
Wakiilka Wakiilka> Ha isticmaalin
Tijaabi isku xirka internetka
Hadda waxaan xaqiijineynaa in xiriirku sax yahay, Waxaan sugeynaa inay na siiso natiijada «NAT 2» iyo xawaare xiriir wanaagsan sida ku xusan xawaaraha aan qandaraaska qaadanay. Hadda waxay had iyo jeer ku xirnaan doontaa DMZ si otomaatig ah.
U xilsaar IP go'an Xbox One
Gudaha General, Dooro Dejinta Shabakada iyo ka dib Fursadaha Horukacsan qaado qoraalada ama sawirada macluumaadka la soo bandhigay ka hor inta aynaan bilaabin u xilsaarno IP go'an Xbox-keena.
Dejinta IP> Buug
Riix «B» si aad ugu laabato shaashadda Nidaamka Shabakadaha waxayna si otomaatig ah u hubin doontaa xiriirka internetka
Waa muhiim in dhammaan xogta saxda ah la soo bandhigo sidaa darteed waa inaad hubisaa inaad si sax ah u gashay. Nama waxna ma dhacaan haddii aan guul darreysano maxaa yeelay marwalba waan dib u cusbooneysiin karnaa goobaha shabakadda si otomaatig ah waxayna hagaajineysaa wixii qalad ah.
Sida loo wanaajiyo iskuxirkeyga ciyaaraha fiidiyowga
Waxaan halkan kaaga tagi doonnaa talooyin si aad u wanaajiso isku xirnaantaada ciyaaraha fiidiyowga oo markaa ka dhigto inta ugu badan saacadaha firaaqada meel kasta oo aad joogtid:
Hubi haddii hawl wadeenkaagu leeyahay “qaabka ciyaarta”, Si tan loo sameeyo, wac adeegga macaamiisha ama hubi router-kaaga qaabeynta adoo raadinaya qaabkan, oo badanaa loo yaqaan "Jidka Degdegga ah".
Fikrad ahaan, in laga fogaado luminta macluumaadka oo la yareeyo LAG had iyo jeer waa in la adeegsadaa isku xirka fiilada, WiFi ma xasilloon oo saturates si fudud, haddii aad ku xidhi karto Console ciyaarta aad by cable waxaad had iyo jeer heli doontaa natiijooyin fiican.
Isku day inaad barafoojiso ama aad xaddiddo soo dejinta waxaad sameyneyso intaad ciyaareyso ciyaaraha fiidiyowga, soo degsashada xargaha xawaaraha ayaa ku qancinaya router-ka.
Yaree tirada qalabka kuxiran shabakadaada iyada oo loo marayo WiFi.
Waxa kale oo suurtogal ah inaad si fudud u xirfad u lahayn ciyaaraha fiidiyowga isla markaana xidhiidhku yahay marmarsiiyo keliya in aad inta badan dhigto markii aad "Degdeg ah" ugu yeerto Wicitaanka Waajibaadka, taas awgeed ma lihin xalka xilligan, kaliya waa inaad ku dhaqantaa, ku dhaqantaa oo ku dhaqantaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Tababarada » Sida loo furo dekedaha loona hagaajiyo isku xirnaantaada ciyaaraha fiidiyowga
OnePlus 8 iyo OnePlus 8 Pro: qeexitaannada, qiimaha iyo helitaanka